Amagumbi abucala eSt Savior - I-Airbnb
Amagumbi abucala eSt Savior
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguSally
Amagumbi abucala een-suite anamhlanje eeholide kunye neendawo zokuhlala zexesha eliphakathi eSt Saviour. Ipropathi ifumaneka malunga nemizuzu engama-20 umgama wokuhamba ukuya entliziyweni yeSt Helier kwaye malunga nemizuzu emi-2 ukusuka kwindawo yokumisa ibhasi ekufutshane ehanjiswa rhoqo yinkonzo yebhasi yaseJersey.
Igumbi elinomoya elikhulu lanamhlanje eline-ensuite.
Isithuba sikhulu ngokwaneleyo ukuze kuhlaliswe ibhedi yokuhamba okanye ibhedi. Kukho ifriji encinci kunye neti kunye nezibonelelo zekofu kwigumbi. Kwakhona iTV encinci eludongeni. I-Wi-Fi ilungile.
Yindawo ezolileyo nekhuselekileyo. Kufuphi kakhulu kwiholo yokutya kunye negaraji. "I-Five Oaks ityela indlu pub" yimizuzu emihlanu uhamba umgama ukusuka kwindlu yethu. Indawo yokuthatha yaseTshayina isondele ngakumbi.
Ikhemesti, indawo yokubhaka, umchebi weenwele, indawo yokwenza iinwele, ivenkile yombane zonke zihamba imizuzu emi-2.
Isikhululo sebhasi sisendleleni enkulu kwimizuzu emi-2 kude.
Sikwindlela enkulu yebhasi eya eZoo/Durrell.
Sizama kangangoko ukwamkela iindwendwe xa zifika. Ngamanye amaxesha ukuba kufanelekile siya kudibana nabo echwebeni. Kungenjalo siya kuqinisekisa ukuba bayayazi indlela yokuya ekhayeni lethu ngebhasi/ngemoto/ngeteksi.
Iindwendwe zikhululekile ukuba zize kwaye zihambe njengoko zithanda. Siyavuya kakhulu ukuncokola nokucebisa xa sikufutshane.
Sizama kangangoko ukwamkela iindwendwe xa zifika. Ngamanye amaxesha ukuba kufanelekile siya kudibana nabo echwebeni. Kungenjalo siya kuqinisekisa ukuba bayayazi indlela yokuya ekha…